Vatengi Saraka - B2B Musika - Vatengi Ruzivo - Alietc.com
Pano paAlietc isu takazvipira kuumba iyo yepasi rose dhijitari yemusika inounza pamwechete vagadziri, vatengesi uye vatengi, kubatsira kutanga pamwe zvakabatana uye kwenguva refu, zvechigarire hukama hwebhizinesi.
Kiyi yekubudirira semutengi inogona kuzorora pane dzinoverengeka zvinhu, saka kuti uwedzere mikana yako yekubudirira paAlietc, isu takanyora iyi inobatsira Yevatengi Yekubatsira iwe kuti ubatsire kudzivisa kazhinji kukanganisa kwakawanda kunoitwa kana uchiedza kutenga zvigadzirwa.
Iyo kiyi yekugadzira mukurumbira wakanaka nevagadziri uye vatengesi ndeye kubhadhara nekukurumidza
Zvakawanda zvaunoshandisa Alietc, iwe uchawedzera kuziva kuti yako mbiri ichaverengera yakakura uye ichakubatsira kuvhara zviitiko zviri nyore. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kunetsa zvine chekuita nemukurumbira wako semutengi ndechekuti unogadzirisa sei account yako nemutengesi kana mugadziri. Zvinogona kunge wabvumirana kubhadhara makumi mashanu muzana kumusoro uye 50% pakutakura. Zvingave kuti iwe unobvumirana nemutengesi kana mugadziri kuti iwe unogadzirisa maakaunti mukati memazuva makumi matatu wagamuchira zvinhu.
Chero mazwi aunobvumirana nawo kubhadhara, anamatira kwavari uye, kana iwe uchida kukurudzira hukama hukuru hwerefu vatengesi uye vagadziri, ripa nekukurumidza kupfuura zvavangatarisira kubhadharwa.
Kuvaka pane kuvimba
Imwe dingindira yakajairika iwe yauchawana iwe paunoshandisa iyo Alietc chikuva ndechekuti tinoisa kusimbisa kukuru kuvimba. Kuvimba, mubhizinesi, ingangove chinhu chakakodzera mune chayo, uye ine mukurumbira mukurumbira seyakavimbika mutengi, simba rako rekutenga richawedzera zvakanyanya. Semuenzaniso, mugadziri anogona kunge achikoka zvinopihwa zvechigadzirwa chavari kutengesa uye icho chigadzirwa chiri kukufarira. Fungidzira kana mugadziri aine matatu ekupa, maviri kubva kune vatengi vasina mukurumbira, uye zvaunopihwa, izvo zviri zvishoma zvakaderera, asi ivo vanoziva kuti kana vakabata newe, ivo vachabhadharwa pasina matambudziko, mikana ndeykuti kunyange yako ingave chakaderera chinopihwa, ndicho chinogamuchirwa nekuti unoonekwa semutengi anovimbika.
Kukurukurirana kwakanaka kwakakosha
Kubvira pamavambo chaipo pekutengeserana, kwakanaka, kwakajeka uye kutaurirana kwakawanda kunokosha. Usatya kubvunza mutengesi kana Mugadziri chero mibvunzo nezve zvigadzirwa zvavari kutengesa, kusanganisira zvekusvitswa marevheni, nezvimwe .. Kunonoka kunyunyuta nezve chimwe chinhu kana odhi yasvika.
Ehe, kutaurirana hakufanire kupera kana ada yako yapera uye zvinhu zvasvika uye zviri kukugutsikana kwako. Rega mutengesi kana mugadziri azive kuti iwe unofara chose nezvese uye kuti unotarisira kuzoita bhizinesi zvakare munguva pfupi iri kutevera. Chikamu chebudiriro ye Alietc inoenderana nehuwandu hwehukama hwakanaka, hurefu hwakagadzirwa pakati pevatengi, vatengesi uye vagadziri.
Pano paAlietc tinotenda zvizere kuti sezvo isu tiri vepasirese pamusika, havazi vese vachataura mitauro yakafanana. Nekuti kukurukurirana kwakanaka kwakakosha, isu takanyora rondedzero yevashanduri vanozokwanisa kukubatsira mukutaurirana kwako.
Kubata vatengesi uye vagadziri
Nekuti vatengi havafanire kuve nhengo kuti vatenge zvigadzirwa paAlietc, isu takasarudza kuti nzira yakachengeteka kwazvo yekutanga kutaurirana ichauya kuburikidza nesu kutanga. Kunyangwe chigadzirwa chiri kutengeswa pamutengo wakasarudzika kana mutengesi / mugadziri ari kukoka zvinopihwa, yako yekutanga yekusangana inofanirwa kuve Alietc.
Izvi ndezvekuti tikwanise kudzivirira 'vapamhi' uye kusora mabvunzisiro asiri echokwadi. Kana tangogutsikana nokubvunza kwako kuri kwechokwadi, tinokupa izvo zvevatengesi kana zvemugadziriso zvekuita uye iwe unogona kuzozoita zvakananga navo, haufanirwe kusanganisira Alietc chero mberi.
Iwe unogona kushandisa yedu yemagetsi yekutsvaga injini kuti uwane vagadziri kana vatengesi vezvakagadzirwa (s) iwe zvauri kutsvaga uye nekuona vatengesi mahara.
Unogona kuisa bhiza pane chero zvigadzirwa zvakanyorwa kutengeswa pane Alietc chikuva. Kuti uwane mhinduro iyi unofanirwa kunyorera kune chero chirongwa.
Pakupedzisira, iwe unogona kuisa chikumbiro chechigadzirwa, mauri unojekesa icho zvigadzirwa (s) iwe zvauri kutsvaga kutenga uye zvaunogadzirira kubhadhara (nazvo) - chero mutengesi / mugadziri anogona kupa zvigadzirwa (s) iwe wauri kutsvaga uchawana nekukasira ziviso yechako chigadzirwa chikumbiro uye wozozoita kutaurirana kana mutengo wauri kutsvaga kubhadhara uchifadza kwavari.
Kana iwe uri kutarisa kuti utenge zvigadzirwa, saka unenge wauya zvirokwazvo kunzvimbo chaiyo. Alietc ndeyechokwadi “Aladdin's Ibako” yeinenge chero zvigadzirwa zvisingafungidzirwe kana zvigadzirwa zvaungafungidzira, uye zvakawanda zvaungangodaro usina kumboziva kuti zviripo.
Senge digital B2B pamusika, Alietc yakagadzirwa nechinangwa chekusvitsa vatengi kune vatengesi uye vagadziri vezvigadzirwa nemutengo unoratidzika apo ichivimbisa yakakwirira emhando. Izvo iwe zvauchawanawo ndezvekuti, zvinoenderana neizvo iwe zvauri kutsvaga kutenga, ungangowana vatengesi vanoverengeka, vangave vanogadzira kana vatengesi, zvinoreva kuti vanozove nechido chekukupa iwe zvigadzirwa nemutengo kuti zvikwane iwe kuti utange chii chichava netariro hukama hwakanaka, hunogara kwenguva refu.
Kuburikidza nekushandiswa kwakawandisa kwemaitiro ekutarisirwa eSEO, takagadzira yakasarudzika B2B nzvimbo yekutengesa isina kungova nezvigadzirwa zvinotengeswa pamitengo chaiyo sezvaungawana pamapuratifomu akadai se eBay kana AliBaba, asi zvinokurudzirawo kutaurirana kwakananga pakati pevatengi nevatengesi, vese vari nhengo dzeAlietc papuratifomu, zvinoreva kuti vese vane tsika yekuita bhizinesi.
Izvo zvakakosha kuti iwe unzwisise ndezvekuti iwe une kutonga kwakazara pamusoro pekuti uye kubva kuna ani waunotenga zvigadzirwa, sezvinozoratidzwa pazasi.
Paunenge uchangosaina kuenda kuAlietc, iwe unozogona kugadzira yako mbiri.
Ndokumbirawo utore nguva shomashoma kugadzira iyo maziso ekubata maziso anozofadza vatengi vangangoita - isu takagadzira Chinyorwa chinobatsira Chekugadzira yako Alietc Mbiri iyo inongowanikwa kune nhengo. Pamwe pamwe needu vamwe vashandisi akakosha anoshandisa
Chekupedzisira, ungangoda kusaina kune imwe yedu urongwa hwenhengo, kana iwe uchida kuisa bhidi kana kuwedzera chikumbiro chekutenga kwechigadzirwa.
Paunenge uchangosaina kuenda kuAlietc, wakasununguka kuti utange kutsvaga kwako uye kupi zvigadzirwa zvekutenga.
Izvi zvinogona kuitwa imwe yenzira nhatu:
Tsvaga uye vatengesi Iwe unogona kushandisa yedu yemagetsi yekutsvaga injini kuti uwane vagadziri kana vatengesi vezvakagadzirwa (s) iwe zvauri kutsvaga uye nekuona vatengesi mahara.
Nzvimbo mabhendi. Iwe unogona kuisa bhidhi pane chero zvigadzirwa zvakanyorwa kutengeswa pane Alietc papuratifomu. Kuti uwane mhinduro iyi unofanirwa kunyorera kune chero chirongwa.
Icho Chigadzirwa Kutenga Chikumbiro. Iwe unogona kuisa chikumbiro chechigadzirwa, mauri unojekesa icho zvigadzirwa (s) zvauri kutsvaga kutenga uye zvaunogadzirira kubhadhara (izvo) - chero mutengesi / mugadziri anogona kupa zvigadzirwa zvauri uchitsvaga uchagamuchira ziviso yekukurumidza yechako chigadzirwa uye unobva waita runhare kana mutengo wauri kutsvaga kubhadhara uchifadza kwavari. Kuti uwane mhinduro iyi unofanirwa kunyorera kune chero chirongwa.
Kana uchine mibvunzo
Nekuti iwe unenge usati washandisa Alietc kare, iwe unogona kunge uine mimwe mibvunzo yekuwedzera iwe yaunoda kupindurwa. Chero mubvunzo waunoda kupindura, isu tiri pano kuti tikubatsire, saka sangana uye isu tichakurumidza kupindura.
Alietc - Yakanyanya Kupfuura Musika weB2B
Zvigadzirwa zvePurazi - Zviyo, Zvibereko nezvimwe
Yakagadziriswa Kudya & Zvinwiwa Zvigadzirwa & Nezvigadzirwa
Zvekurimisa - Mafetiraiza, Mishonga yekuuraya zvipuka & Mbeu
Agri & Chikafu Kugadzira Machina & Midziyo
Hove & Hove Zvigadzirwa
Horticulture - Maruva, Zvirimwa & Zvakafanana Zvigadzirwa
Mombe, Nyuchi, Nyama & Zvigadzirwa Zvemhuka
Textile & Leather Chigadzirwa
Timepieces Zvishongo Ziso
Mota & zvishongedzo
Runako & Kuchengeta Kwemunhu
Magetsi Zvishandiso & Zvekushandisa
Zvipo & Crafts
Hutano & Kurapa
Mutoro Mabhegi & Mhosva
Rubha & Mapurasitiki
Shoes & zvishongedzo
Mitambo & Varaidzo
Kuvaka & Zvivakwa
Zvicherwa & Metallurgy
Zvinwiwa Zvinwiwa, Fodya & Zvakafanana Zvigadzirwa
Bar Sets uye Zvigadzirwa Zvinoenderana